के तपाई जागिरको लागि अन्तर्वार्ता दिन जाँदै हुनुहुन्छ ? [थाहा पाउनुस यस्ता कुरा] - नेपालबहस
गृहपृष्ठ जीवनशैली नयाँ रोजगारी के तपाई जागिरको लागि अन्तर्वार्ता दिन जाँदै हुनुहुन्छ ?
एजेन्सी । के तपाईंले कुनै अफिस वा कम्पनीमा अन्तर्वार्ता दिन जान लागेको कम्पनीको बारेमा थाहा पाउनुहोस्। कम्पनीको ‘वेबसाइट’ मार्फत अथवा गुगलमार्फत कम्पनीको बारेमा बुझ्न सकिन्छ।
सम्भव भएसम्म कम्पनी किन खोलिएको हो, के काम गर्छ, कसरी गर्छ भन्नेसम्म थाहा पाउनुहोस्। थाहा पाएका जानकारी कसरी प्रस्तुत गर्ने भनेर कपीमा नोट गर्नुहोस्। अन्तर्वार्ता लिने मान्छे को हो भन्ने थाहा छ भने उक्त मान्छेको बारेमा थाहा पाउनुहोस्।
अन्तर्वार्ता दिन जानुअघि निम्न कुरामा ध्यान दिनुहोस्:
१. कम्पनीको बारेमा जानकारी राख्नुहोस्
तपाईंले अन्तर्वार्ता दिन जान लागेको कम्पनीको बारेमा थाहा पाउनुहोस्। कम्पनीको ‘वेबसाइट’ मार्फत अथवा गुगलमार्फत कम्पनीको बारेमा बुझ्न सकिन्छ। सम्भव भएसम्म कम्पनी किन खोलिएको हो, के काम गर्छ, कसरी गर्छ भन्नेसम्म थाहा पाउनुहोस्। थाहा पाएका जानकारी कसरी प्रस्तुत गर्ने भनेर कपीमा नोट गर्नुहोस्। अन्तर्वार्ता लिने मान्छे को हो भन्ने थाहा छ भने उक्त मान्छेको बारेमा थाहा पाउनुहोस्।
२. आफूले लगाउने पोसाकमा ध्यान दिनुहोस्
अन्तर्वार्ता दिन जाँदा लगाएको पोसाकले धेरै अर्थ राख्छ। अरू दिन जस्तोसुकै भएर हिँडे पनि त्यो दिन विशेष बन्नुहोस्। कम्पनीको परिवेश ‘कल्चर’ थाहा पाइसकेपछि आफू कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बुझिन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईंले नयाँ भनेर लगाएको पोसाक कतै मैलो भएको हुन सक्छ। कपडामा प्वाल परेको हुन सक्छ। त्यसैले, पोसाक लगाउने कुरामा हेलचेक्र्याइँ नगर्नुहोस्।
३. ‘फ्रेन्ड्ली’ हुनुहोस्
अन्तर्वार्ता दिन कार्यालयमा छिर्दा अन्तर्वार्ता कारलाई उचित सम्बोधन गर्नुहोस्। ‘प्रोफेसनल’ हुनुहोस्। आफ्नो परिचय तपाईं आफैंले दिनुहोस्। आफ्नो नाम, ठेगाना सबै बताउनुहोस्।
अन्तर्वार्ताकारले कामकै विषयमा मात्र प्रश्न गर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ कुनै समस्या बताएर त्यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर सोधिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईंले कथा बुन्नुपर्छ। यस्ता विभिन्न पक्षहरूमाथि अन्तर्वार्ता दिन जानुअगावै सोच्नुहोस्। तपाईंले समाधानका उपाय बताइरहँदा त्यसको सुरुवात र अन्त्य मिलेको हुनुपर्छ। सोच्नुस्, खाली दिमाग लिएर अन्तर्वार्ता दिन जानु हुँदैन।
५. प्रश्नहरू तयार पार्नुहोस्
अन्तर्वार्ता दिन जाँदा प्रश्नहरू तपाईंसँग पनि हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ अन्तर्वार्ताकारले ‘तपाईंसँग केही प्रश्न छ ? ’ भनेर सोधिदिन सक्छ। यस्तो अवस्था ‘छैन’ नभन्नुस्। काम गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनलाई पनि तपाईंले प्रश्न सोध्नुपर्छ।
कम्पनीको आवश्यकता के हो, लक्ष्यमा पुग्न आफूले कस्तो सहयोग गर्न सक्छु जस्ता जिज्ञासाहरू राख्नुहोस्। अन्तर्वार्ता कारले कम्पनीमा तपाईंको आवश्यकता नभएको तरिकाले कुरा गर्न सक्छन्। कम्पनीमा आफूले पाउने बिदाको बारेमा नसोध्नुहोस्।
६. बायोडाटा लान नबिर्सिनुस्
अन्तर्वार्ता दिन जानुअघि तपाईंले आफ्नो बायोडाटा बोक्न नबिर्सिनुहोस्। ‘सीभी’ प्रिन्ट गर्नुहोस्। पोर्टफोलियोदेखि तपाईंको बारेमा खुल्ने सबै सूचनाहरू बोक्नुहोस्। आफ्नो ब्यागमा नोटप्याड, डटपेन बोक्नुहोस्। कहिलेकाहीँ अन्तर्वार्ता दिँदा लेख्नुपर्ने हुन सक्छ।
७. कहाँ पुग्नुपर्ने हो, जान्नुहोस्
अन्तर्वार्ताका लागि कहाँ पुग्नुपर्ने हो, पहिला नै थाहा पाउनुहोस्। कम्पनीमा पुग्न तपाईं बसेको ठाउँबाट कति समय लाग्छ, कतिबेर हिँड्नुपर्छ भनेर अध्ययन गर्नुहोस्। ‘गुगलम्याप’बाट यो बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। कोठाबाट कति समयमा हिँड्नुपर्छ, कुन बाटो भएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुहोस्। अफिसमा ढिलो नपुग्नुहोस्।
८. अघिल्लो दिन छिट्टै सुत्नुस्, स्वस्थ खाना खानुस्
अन्तर्वार्ता दिन जाने अघिल्लो दिन कुनै तनाव नलिनुस्। समयमै सुत्नुस्। अबेरसम्म अन्तर्वार्ताको तयारी गर्नु पर्दैन। त्यस्तै, स्वस्थ खाना खानु जरुरी छ। स्वास्थ्यमा असर पर्ने कुनैपनि किसिमको खानाले अन्तर्वार्ता दिँदा तपाईंलाई असहज हुन सक्छ।
९. आफूलाई दिइने पारि श्रमिक थाहा पाउनुहोस्
अन्तर्वार्ताका लागि तयारी गर्नु ठिक हो तर पारिश्रमिक पनि सँगै जोडिएर आउने विषय हो। आफ्नो लागि कति तलब उपयुक्त हुन्छ भनेर तपाईं स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्तर्वार्ताकारले तपाईंको अपेक्षा सोध्यो भने बिनाहिचकिचाहट भनिदिनुहोस्। कस्ता कामका लागि कस्ता कस्तो पारि श्रमिक उपयुक्त हुन्छ भनेर थाहा पाउन विभिन्न वेबसाइटहरू छन्। तपाईंले गुगलमा खोज्न सक्नुहुन्छ।
१०.मोबाइल स्विच अफ गर्नुहोस्
मोबाइलबाट तपाईंले संसारभरको जानकारी पाइरहेको हुन सक्छ। एकछिन मोबाइल स्विच अफ गरिदिनुहोस्। अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा साथीको म्यासेज आउन सक्छ। घरबाट फोन आउन सक्छ। यसले तपाईंको अन्तर्वार्तामा व्यवधान पु¥याउन सक्छ। एकछिन सबैतिरबाट मुक्त भएर अन्तर्वार्ता दिनमै लाग्नुहोस्।
अघिल्लो लेखऋद्धिसिद्धि सिमेण्टको उत्पादन शुरु, देशभरी सुपथ मुल्यमा विक्री वितरण
अर्को लेखपूर्वी अफगानिस्तानमा १८ जना लडाकू मारिए
दुईवटा इन्जिन भएको ठूलो जेटको पहिलो परीक्षण उडान सफल
आज अन्तिम समयसम्म पनि खरिदकर्ता आक्रामक, कारोवारले भने दिएन साथ (प्राविधिक विश्लेषण सहित)
व्यवसायिक वातावरण सुचकांकको धन्दा—२
एन्ड्रोइड लन्च गर्न दिनु ठूलो गल्ती : बिल गेट्स
हुवावे प्रतिबन्ध भएपछि गुगललाई वार्षिक ४२ करोड डलर घाटा !